Xildhibaan C/qaadir Carabow oo ku baxay xiisad ka jirtay degmada Balcad – XAMAR POST
Xildhibaan C/qaadir Carabow Ibraahim oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa ku baxay xiisad labadii maalmood ee la soo dhaafay ka jirtay degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Hoose, xiisada ayaa u dhaxeysay Guddoomiyaha degmada iyo Taliyaha Nabadsugida degmada.
Xildhibaanka oo shalay safar degdeg ah ku tagay Balcad ayaa kulan la qaatay labada dhinac ee xiisada u dhaxeysay, isagoo ku guuleystay in la xaliyo wixii khilaaf ah ee ka dhashay gacan ka hadalka iyo in la kala qaaday ciidamada dagaalamay.
Kulanka ayaa waxaa qeyb ka ahaa Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan, Guddoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur, Guddoomiyeyaashi hore degmada iyo Xildhibaano ka tirsan Maamulka Hirshabeelle.
Waxaa lagu wadaa in kulan kale oo labada dhinac ah qeybna ka yihiin odayaasha deegaanka inay isugu yimaadaan magaalada Muqdisho, si loo soo afjaro xiisada, loona gaaro xal rasmi ah.
Xiisada ka taagneyd degmada Balcad ayaa saameyn ku yeelatay dadka deegaanka, kaddib markii uu iska hor imaad dhex maray Ciidamo kala taabacsan Guddoomiyaha degmada Balcad, Xoghayaha degmada iyo taliyaha Nabadsugida, waxaana iska hor imaadka uu salka ku hayay muran ka dhashay isbaaro lacagaha looga qaado oo labada dhinac dhigteen duleedka iyo gudaha degmada Balcad.
Maxaa Kasoo Baxay Kulankii Kheyre Iyo Madaxweyne Lafgareen?